Iyo Apple Watch Chigadzirwa (RED) inogona kuunzwa ino chitubu | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch Chigadzirwa (RED) inogona kuunzwa ino chitubu
Sezvo Apple yakaunza iyo Apple Watch munaGunyana 2014, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakavandudza ichi chishandiso rinenge gore rega rega, chishandiso chatinogona kuwana mualuminium, simbi, ceramic uye titanium asi zvinoshanda kuchengeta iwo iwo mavara, mavara ayo mutsva anogona kubatanidzwa.
Tiri kutaura nezvezvitsvuku, iyo tsvuku tsvuku iyo yatinogona kuwana mune (RED) zvigadzirwa zvinoshanda neApple mukurwisa AIDS, pamwe nezvimwewo zvirwere, muSub-Saharan Africa. Vakomana vanobva kuWatchGeneration vanoti mamwe manhamba ekuwanikwa anowanikwa mukatalog yeApple ivo vaizoreva kune Apple Watch Chigadzirwa (RED).
Iyo Apple Watch yaizojoinha zvigadzirwa zvakasiyana (RED) iyo Apple iine mune yayo katarogu uye iyo inoumbwa kwete kwete chete zvishandiso, asiwo akasiyana akasiyana akadai iPhone, iPad makesi uye tambo.
Iyi modhi yaizongoitwa chete yealuminium uye yaizowanikwa mune ese 40 uye 44 mm. Nezve mutengo, iyi ichave yakafanana iyo yatinogona kuwana parizvino Series 5 zvese mu40 uye 44 mm.
Sezvo Apple yakatanga kubatana kwayo neRED makore gumi nematatu apfuura, iyo Cupertino-based kambani yakakwidza inodarika mamirioni mazana maviri emadhora. Apple haisiriyo yega kambani yakabatana neRED. Bank of America, durex, Salfesforce, Starbucks, telcel, SAP, Johnson & Johnson, Anorova mamwe emakambani anoshanda pamwe nechirongwa ichi, kunyangwe iwo asingapi mari yakafanana neApple.
(RED) yakavambwa nemuimbi Bono naBobby Shriver, uye kubva musi yakaunganidza pamusoro pe $ 600 miriyoni yeGlobal Fund inorwisa AIDS, Tuberculosis neMalaria kuGhana, Kenya, Lesotho, Rwanda, South Africa, Swaziland, Tanzania neZambia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Chigadzirwa (RED) inogona kuunzwa ino chitubu
Zviitiko zvine mukurumbira zveApple zvemakore gumi. 2010 kusvika 2019
Maitiro ekudzima Siri nhoroondo uye kuraira kubva kuMac